Mudug & Banaadir oo u gudbay wareega 2-aad – Halkan ka dhegaysto baahinta ciyaarta ee idaacada Daljir – Jamal Kaka & Baydhabo oo ku sugan garoonka kubadda cagta ee Mire Awaare. – Radio Daljir
Diseembar 23, 2010 12:00 b 0
Halkan ka dhegaysto baahinta ciyaarta ee idaacada Daljir, Dec 23.
Garowe, Dec 23 – Waxaa maanta ciyaaray xulalka Mudug v Sool & Banaadir v Gedo ee kooxda B ee tartanka ciyaaraha gobollada Somaliya. Ciyaaraha maanta ayaa ahaa kuwa ay ku kala harayeen 4-ta xul ee kooxda B, ayna ku soo baxayeen 2-da xul ee u gudbi doona wareega 2-aad (Quarter finals) ee ciyaaraha.
Mudug v Sool
Ciyaartii dhex martay labada gobol ee Mudug v Sool ayaa ahayd ciyaar aad u adag oo labada xulba ay soo bandhigeen ciyaar wanaag iyo farsamo ciyaareed oo aad u saraysa. Xulka Mudug ayaa aad u cadcadaa wareega 1-aad ee ciyaarta, halka xulka Sool-na ay ku gacan sareeyeen wareega 2-aad.
Xulka Mudug ayaa dhaliyey goolkii ugu horeeyey ee ciyaarta, walow Sool-na ay wax yar ka dib iyana dhaliyeen gool. Ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbardhac 1-1.
Xulka gobolka Mudug oo ayaa hore uga guulaystay Gedo, barbardhac la galay Banaadir, una gudbi doona wejiga 2-aad ee ciyaaraha, halka xulka Sool ay ku hari doonaan wareega 1-aad. Xulka Sool ayaa hore ula ciyaaray Banaadir & Gedo oo ay ciyaarahoodu ku dhamaadeen barbardhac, balse aan ku guulaysan hal ciyaarna.
Banaadir v Gedo
Ciyaartan ayaa ahayd mid aad u xiisa badan oo xulka Gedo ay ku hanweynaayeen in ay guushu ku raacdo, balse xulka Banaadir ayaa badi ciyaarta ku gacan sareeyey, dhaliyeyna goolkii ugu horeeyey ee ciyaarta, walow xulka Gedona ay gool wax yar ka dib dhaliyeen.
Xulka Banaadir ayaa 2 gool oo kale dhaliyey, halka Gedo-na ay dhaliyeen gool kale.
Ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-2 oo ay guushu ku raacday xulka gobolka Banaadir.
Xulka Banaadir ayaa hore ula ciyaaray Mudug & Sool, barbardhacna ay ciyaarahoodu ku dhamaadeen, guusha ay guulaysteen Gedo ayaana u suurtagalisay in ay u gudbaan wareegaan 2-aad ee ciyaaraha.
Xulalka Mudug & Banaadir ee kooxda B ayaa u gudbay wareega 2-aad ee ciyaaraha, halka Sool & Gedo oo ku hareen wareega 1-aad, ayna u shiraacan doonaan hoygoodii.
Halkan kala soco jadwalka & natiijada ciyaaraha gobollada Somaliya – halkan …
Warbixin ku saabsan ciyaarihii maanta dhex maray xulalka gobollada Nugaal v Hiiraan (4-3), iyo J. Hoose v Galgaduud (3-1).